Home गृहपृष्ठ प्रवासको साहित्य गद्य (प्रवास)
मेरो पुरा नाम पसुपति भए पनि गाउँमा सबैले मलाई “पस्पते” भनेर चिन्छन वा बोलाउँछन्। अचेल म मान्छेहरुको मन पढ्ने मेसिनको अविस्कार गर्ने सोचमा डुबेको छु। यो मेरो आबश्यकता हो। आबश्यकता अबिस्कारकि जननी हुन् भन्ने कुरा मलाई राम्ररी थाह छ। त्यस्तो मेसिन नभइनहुने बाध्यता चाहिँ के परेछ भन्नु होला,	Read more
सुलसुलेको शब्दकोशीय अर्थ हुन्छ, हाँस-कुखुरा, परेवा, वानर आदिका जिउमा लाग्ने मसिनो र ज्यादा टोक्ने किरो । पशु-प्राणीको जिउमा लाग्ने यो सुलसुले शब्दलाई हिजो आज मानवीकरण गरी मान्छेको ‘सुलसुले स्वभाव’ भन्ने अर्थमा पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ । आमाले कुखुरा पाल्न साह्रै रुचाउँथिन् । घरभरि कुखुराहरू पालिएका थिए हाम्रो घरमा ।	Read more
on: चैत्र १८ , २०७८ शुक्रबार- १०:३३
वर्तमान समयलाई कम्यूटर एवं डिजिटल युग भनेर जानिन्छ। अठारौँ शताब्दीको अन्तमा सूत्रपात भएको औद्योगिक क्रान्तिले समाजमा नयाँ परिवर्तनको हुरी लिएर आयो। यस क्रान्तिको फल स्वरूप वस्त्र उद्योगमा भएको मशिनीकरणले पूरै विश्वको कायापलट गरिदिन्छ। विज्ञानको सामर्थ्य एवं विकासवादको नीतिले सूचना क्रान्तिको पनि सूत्रपात हुन समय लागेन। टेलीफोन एवं रेडियोको अविष्कार, सूचना	Read more
on: चैत्र ९ , २०७८ बुधबार- ०९:४६
‘श्री जलेश्वरी निम्न माध्यमिक विद्यालय’ नाउ सामान्य हो तर यो नाउँ सुन्दा र कसैले उच्चारण गरिदिदा हार्दिक स्रद्धाले विभोर हुन्छु मानौँ मेरी आमाको नाउँ सुनिरहेको छु । उनी ५० वर्ष बुढी भइछिन् । स्वर्ण जयन्तीको तैयारी भइरहेको खबर जेठा दाजुबाट थाहा पाएँ । मलाई हर्ष र विस्मात दुबै लाग्यो	Read more
मेरो नामको डर – कृष्ण प्रधान
on: फाल्गुन १७ , २०७८ मंगलवार- ०४:५०
“What’s inaname ? That which we callarose By any other name’ Would smell as sweer.” -William Shakespeare (Romio & Juliet) उपरोक्त नाट्यसंवाद उगेल्ने नाट्य सम्राट शेक्सपियर हुन् । “वाट्स इन अ नेम ?” अर्थात् नाममा के छ ? नाममा के छ के छैन भन्ने कुरो शेक्सपियरलाई	Read more
on: माघ १७ , २०७८ सोमबार- ०१:४६
दिसम्बरको महिना पुषे जाडोले आफ्नो सामराज्य जमाएको थियो। तीमाथि जैसलमेरको मरूभूमि, मरूभूमिमा जाडो र गरमी दुवै तीव्र पर्दछ । यहाँ पर्ने कठ्याङ्ग्रिने चिसोको अनुमान उतिकै तातो जुलाईलाई सोचेर लगाउन सकिन्छ। बेलुकी पहरको पाँच बजेको थियो। गर्मीको मौसममा पाँच बजेलाई बेलुकी भन्नेलाई दिउसै ट्वाक्क लगाएछ भन्लान् तर अहिलेको कुरा	Read more